Fifampiarahaban'ny tafika Nahavoly zanakazo 1000 ny hery vonjy taitra
"Raha ny isanay tonga eto Imerintsiatosika dia mahatratra 300 olona, ny ankizy tsy isaina amin'izany. Ka raha nahavita telo avy farafahakeliny dia efa 1 000 fototra eo ho eo no novolena",
hoy ny Jeneraly Jocelyn Rakotoson, lehiben'ny miaramila Hery Vonjy Taitra. Efa nahazo tso-drano avy amin'ny lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika Malagasy moa izy ireo raha nialoha ireto voalohany amin'izao fambolen-kazo izao. Manohy ny ezaky ny fitondrana ho fanamaitsoana an'i Madagasikara, araka ny fanombohana izay notarihin'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina, ny 19 janoary teo moa izy ireo.
Tany Imerintsiatosika tao amin'ny rezimantan'ny Tafondro na ny RAL izay toby Miaramila ihany no notanterahina ny fambolen-kazo. Avy amin'ny eo an-toerana ireo zanaka kininina oliva izay nambolena ny sabotsy teo. Taorian'ny fambolen-kazo dia niroso tamin'ny tatitra samihafa ny mpiandraikitra lefitra ka nasongadiny tamin'izany fa nanampy ny asan'ny miaramila ireo fitaovana nomen'ny fitondrana foibe. Niroso tamin'ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao izy ireo avy eo. Nisongadina nandritra ny lanonana ny fiarahabana ny manamboninahitry ny Tafika nasandratra ho Jeneraly ka anisan'izany ity Lehiben'ny Hery Vonjy taitra ity. Nanolotra loko handokoana ny biraon'ny RAL (Régiment d'Artillerie Lourde) izy ireo. Voalazan'ny lehiben'ny Tafondro teo an-toerana, ny Kolonely Jean Désiré Vahinisoa Rafaralahy fa afaka mamatsy zanakazo maimaimpoana hatrany izy ireo.